Erling Håland oo ka hadlay xiisaha kaga imaanaya kooxda Real Madrid – Gool FM
(Yurub) 26 Juun 2020. Weeraryahanka reer Norway iyo kooxda Borussia Dortmund ee Erling Håland ayaa fariin u diray kooxaha xiiseynaya isaga ay ugu horeyso Real Madrid, wuxuuna ka hadlay warbixinada looga hadlay mustaqbalkiisa.
Erling Håland ayaa yimid kooxda Borussia Dortmund bishii Janaayo, wuxuuna soo bandhigay qaab ciyaareed layaab leh oo soo jiitay dhamaan kooxaha waa weyn ee Yurub.
Håland ayaa rikoorro cajiib ah sameeyay xilli ciyaareedkan, wuxuuna ku sameeyay kooxaha Red Bull Salzburg iyo Borussia Dortmund, iyadoo wadar ahaan goolashiisa ay gaarayaan 40 gool, wuxuuna sidoo kale caawiyay 10 gool kale, 39 kulan kaliya uu ciyaaray.
Haddaba Erling Håland ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “AS” ee dalka Spain wuxuu ku sheegay:
“In badan kama fikiro mustaqbalkeyga, balse waxaan ku noolahay waqtiga xaadirka ah, waxaan go’aansadaa waxa u fiican xirfadeyda shaqo, daqiiqad kasta, waana sababtaas darteed waxaan ugu biiray Borussia Dortmund suuqii jiilaalka”.
“Waxaan ku qanacsanahay inaan qeeyb ka ahay mid ka mid ah kooxaha ugu fiican adduunka, waxaana heystaa qandaraas ilaa sanadka 2024, sidaas darteed kuma fikirayo inaan baxo gabi ahaanba”.
Jürgen Klopp oo farxad darteed la ilmeeyay kaddib markii ay Liverpool ku guuleysatay Premier League